Adobe Proto: Kubata Prototyping paTablet yako | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 22, 2011 Douglas Karr
Adobe yakatanga suite ye touch zvinoshandiswa zvinoenderana neiyo Android piritsi. Zvakanaka kuti Photoshop, Debut, Pfungwa uye Kuler vari kuita nzira yavo kuenda kune piritsi uye vakagadzirisirwa iyo yekubata interface, asi ini handina chokwadi chekuti ndinogona kukora munwe nzira yangu kuburikidza navo uye kunyatso kuve nekubudirira (kunyanya sezvo ini ndichiyamwa pa Photoshop).
Iyo imwechete yekushandisa, yakasanganiswa neiyo Adobe Creative Cloud izvo zvakanyatso kumira kwandiri zvaive Adobe Proto. Iko kugona kwekuwana mafuta chimiro chemushandisi chinoshamisira. Tinoshandisa LucidCharts izvozvi uye ndoda kubatana kwekugona. Nekudaro, Proto chishandiso chinoshamisa… kunyanya $ 10.
Ndiri kutarisira kuona Adobe Proto ichiita iyo iyo iPad!
Tags: adobe rekugadzira goreadobe protopiritsi
Kukadzi 4, 2012 na4:41 PM
Kushambadzira kunotyisa & chigadzirwa! Iwe unofanirwa kushandisa yavo yegore sevhisi $149/mwedzi kuti ukwanise kugovera mafaera kuPC, haugone kuchengetedza faira pahwendefa rako uye kushandisa sdcard kana usbdrive, kana email.
Kune dzimwe dzakawanda dzemahara dzimwe nzira dzinokutendera kuti uite chinhu chimwe chete mahara uye kuendesa mafaera emahara.
Ndakataura neAdobe kakawanda, kunyangwe vashandi vavo havana chavanoziva, vane timu yeandroid, asi havazive zvakawanda, kana pre-sales, kana tech tsigiro. Pakupedzisira mushure mevhiki 1 ndakawana email ichiti hazvigone kugovera mafaera kunze kweiyo inodhura yegore sevhisi.
Zvino 90% yevanhu vanoishandisa havakwanise kuwana mafaera avo kune adobe cloud zvakadaro. Adobe haina rubatsiro kwavari, saka vashandisi havana-kupindurwa, vasina-kugadziriswa tekinoroji nyaya muadobe maforamu nerutsigiro.
Vanofanira kuzvipa mahara 10GB kana chimwe chinhu, maapplication aya akakundikana nekuda kweichi chikonzero, usatambise mari yako.
Kukadzi 5, 2012 na7:06 PM
@google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f:disqus - tinotenda zvikuru nekugovera ruzivo irworwo! Izvozvo zvinosuwisa. Ndiri kutanga kushamisika kana Adobe iri kuita dambudziko rekuzivikanwa.